सरस्वती पुजा गर्न गएकि छोरीको बाटोमै मृत्यु !! पुरा पढ्नुहोस !!! - Triveni Online
Home / News / सरस्वती पुजा गर्न गएकि छोरीको बाटोमै मृत्यु !! पुरा पढ्नुहोस !!!
सरस्वती पुजा गर्न गएकि छोरीको बाटोमै मृत्यु !! पुरा पढ्नुहोस !!!
Triveni Online February 11, 2019	News Leaveacomment
आफ्ना बाबुलाई बाबा बाई भन्दै घरबाट निस्किएकी बालिकाको स्कुल नपुग्दै ज्यान गएको छ। स्कुल अगाडिको गेटमा दर्दनाक दुर्घटनाबाट बालिकाको ज्यान गएको हो। महिलाले आफ्नी छोरीलाई स्कुटीमा राखेर स्कुल छोड्न आएकी थिइन्। तर स्कुल नपुग्दै उनको स्कुटी दुर्घटना भयो। ट्याक्टरले बालिकाको टाउको किच्दा उनको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। महिलाको हातमा गहिरो चोट लागेको छ।
Previous सोमबारको दिन भगवान श्री गणेशलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ माघ २८ गते सोमबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ!
Next फेरी मलेसियामा एक युवकको गयो ज्यान,सब अझै आएन नेपाल